Aogositra 29, 2018 Admin
Square nandresy patanty fandoavam-bola ho an'ny crypto Network
Hafanàm-po an fandoavam-bola mafy Square dia nahazo ny patanty ny fandoavam-bola ho an'ny tambajotra izay mamela mpivarotra mba hanaiky vola in Bitcoin. Ny rafitra dia mamela mpandranto hanaiky cryptocurrencies miaraka fomba fandoavam-bola mahazatra sy ny vola avy amin'ny vola ny safidy. Mety farany Square manampy cryptocurrency fandoavam-bola ho amin'ny ankehitriny pos rafitra izay hamela an-tapitrisany ny mpivarotra hanaiky Bitcoin nefa tsy voatery onboard fandoavam-bola hafa processeur na tanana niova fo cryptocurrency vola ho Fiat.
indrindra, ny fanamarinana ihany koa ny antsipirihany ny dingana izay mamela ny rafitra pos manafoana latency in cryptocurrency varotra. Ny fandoavam-bola dia service hanatanteraka izany amin'ny alalan'ny foana manokana varotra blockchain izay mirakitra an-tsoratra avy amin'ny Square-nahavita mpanjifany in real-time, izany dia tsy hanafoana tanteraka ny mety hisian'ny fanafihana mandany avo roa heny, fa famindrana fa mety avy any amin'ny mpivarotra ho amin'ny fanompoana fandoavam-bola. Ny fanamarinana dia ahitana ny boky mihitsy sary izay toa mampiseho Bitcoin fandoavam-bola ho faty amin'ny alalan'ny Square ny ataon'ny mpiara-to-mpiara Cash App.
HONG Kong miteraka visa ho safidy ho an'ny blockchain mpitady asa
Hong Kong ankehitriny mahatonga azy io ho mora kokoa blockchain manam-pahaizana mba hahazoana visa. The Hong Kong fitondram-panjakana namoaka lisitra ny talata talenta izay manarona isan-karazany 11 fiekem izay efa afaka ny hahazo tombony manamarika. Ny visa ho rafitra mahomby mamela ny mpiadina hiditra ka hipetraka eo an-panjakana Shinoa manokana faritra nefa tsy voatery azo antoka aloha ny tolotr'asa avy amin'ny mpampiasa ao an-toerana.
“Ny Scheme dia izay anjara-fanompoana mifototra amin'ny rafitra fidirana. It seeks to attract highly skilled or talented persons to settle in Hong Kong in order to enhance Hong Kong’s economic competitiveness,” according to the program’s description. To qualify, blockchain professionals need to hold at least a bachelor degree, have experience with notable firms in the field, and know how to apply blockchain in financial services.
$140M amidy manerana ny tsena amin'izao fotoana izao